Mba 2 Summer 2017 | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Mba 2 Summer 2017
Nwere olile anya n’oge ọkọchị. Ndị ọrụ TRF nọ na-akwadebe maka oge ọhụụ na-aga n'ihu na nkuzi ụlọ akwụkwọ na-amalite na 1st Septemba, okwu maka GP na ebe obibi. Anyị na-ede akwụkwọ, na-etinye ego ma na-ezute ọtụtụ ndị gọọmentị, ndị isi obodo, ndị ọrụ ebere na ndị mgbasa ozi nwere ike inye aka mee ka ọrụ anyị gaa n'ihu. Anyị ga-eme ka ị mata dịka kọntaktị ndị ahụ na-etolite.
Nnyocha: Nchedo ahụ ike
Onyinye Ụgwọ n'ụlọ akwụkwọ
Ndị dọkịta na Edinburgh
Nụrụ ka anyị na-ekwu okwu na Edinburgh
Nzukọ na USA
Nzukọ ezinụlọ na Croatia
Ọhụụ ọhụrụ maka Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Mgbochi ụmụaka na mgbochi na Germany na UK
Na 28th July TRF gara nzukọ ọzụzụ ụbọchị otu nke NOTA (National Organization for Treatment of Abusers Scotland) na ndị ọkà okwu 2 mara mma. Nke mbụ bụ Prọfesọ Klaus Beier (onye e sere onyinyo), onye ọkachamara na-eduzi mba ụwa gbasara mgbochi ụmụaka n'ụzọ mmekọahụ na onye nrụpụta nke Project Dromelfeld Prevention Project na Germany. Nke abụọ bụ Prọfesọ Kieran McCartan, onye ọkachamara na-ahụ maka ndị ọkachamara na Bristol University, bụ onye nyochara nzaghachi dị ugbu a na nke ga-eme n'ọdịnihu iji soro ndị na-akwa iko na UK na-arụkọ ọrụ n'ihi ihe mmụta sitere na ọrụ Dunkelfeld. Lee akụkọ anyị Ebe a.
Mary Sharpe, onye isi oche anyị bụ onye na-ede akwụkwọ na 'iche echiche' na igbochi Mmekọahụ nke Mmekọahụ IHE, Organizationtù Mba Maka Ọgwụgwọ Ndị Mmegbu. NOTA bụ ọrụ ebere na-enye nkwado maka ndị ọkachamara na-emeso ndị omempụ na-enwe mmekọahụ. Na nyocha a nke nyocha emere n’oge na-adịbeghị anya, Mary sonyeere ndị otu UK dum nke Stuart Allardyce duziri, onye njikwa mba nke Kwụsị ya Ugbu a! Skọtland. Nwere ike ịhụ akụkọ na nke a Ebe a.
Ihe akpọrọ m maka ozi ala a Mmetụta Ịntanetị Na-akpali agụụ mmekọahụ na Ụmụaka. Ọ bụ American College of Pediatricians dere ya dị ka nkwupụta iwu na ụbọchị site na June 2016.
ABỤ: Inwe ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'etiti ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma. A na-ejikọta ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ọtụtụ nsogbu mmetụta uche, nke mmụọ, na nke anụ ahụ. Ndị a na-agụnye ịda mbà n’obi, inwe nchekasị, ime ihe ike na ime ihe ike, ịbụ nwata mgbe a malitere inwe mmekọahụ, ịkwa iko n’ike, ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịtụrụ ime n’oge uto, na inwe echiche na-ezighị ezi banyere mmekọrịta dị n’etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Maka ndị okenye, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-ebute ohere nke ịgba alụkwaghịm nke na-emerụkwa ụmụaka ahụ. American College of Pediatricians na-agba ndị ọkachamara ahụike ume ka ha kọọrọ ndị ọrịa na ezinụlọ ha ihe ize ndụ nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-enye ma na-enye ihe onwunwe iji chebe ụmụaka ka ha ghara ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịgwọ ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ya.
Ọ ga-amasị m ịkwado akwụkwọ maka ndị nne na nna, ndị nkụzi na ndị ọkachamara. Nwoke, kwụsịrị - Ihe kpatara ụmụ okorobịa ji agba mgba & Ihe anyị nwere ike ime gbasara ya bụ Stanford Psychology Professor Philip Zimbardo na Nikita Coulombe. Ọ na-ewukwasị na Prọfesọ Zimbardo kachasị mma 4 nkeji TED Ihe Omume nke Guys nke onye ahụ na-akpakọrịta na-akparịta ụka anyị na onye ọrụ anyị bụ Gary Tọọx Nnwale Ahụhụ Ukwu ahụ.
Ihe edere n'akwukwo a bu na anyi na-eche uwa ohuru obi ike; ụwa nke ụmụ okorobịa na-ahapụ. Ndị edemede na-ekwu na mmebi ahụ na egwuregwu vidio na porn n'ịntanetị emeela ọgbọ nke ihere, ndị na-eme ka ọha na eze, iwepụ mmetụta uche, na ụmụ okorobịa na-eme ihe ize ndụ bụ ndị na-enweghị ike (ma na-achọghị) ịnwagharị ihe mgbagwoju anya na ihe ize ndụ dị iche iche na mmekọrịta dị adị , ụlọ akwụkwọ, na ọrụ. Na-ele anya n 'ileba anya na nsogbu nke na-eweda na ezinụlọ na ebe nile, Mmadụ, Akwụsịla na-enye echiche na umu-okorọbia anyị na-ata ahụhụ site na ụdị ọgwụgwọ ọhụrụ. Ọ na-ewebata atụmatụ ọhụrụ siri ike iji mee ka ha laghachi azụ.
Isi nke ikpe na-enye otu ihe ngwọta nke akụkụ dị iche iche nke ọha mmadụ gụnyere ụlọ akwụkwọ, ndị nne na nna, na ụmụ okorobịa. N'ịbụ ndị jupụtara n'ịkọ akụrụngwa, nchọpụta na-adọrọ mmasị, nchọpụta nghọta, na aro dị iche iche maka mgbanwe, Nwoke, Emebiri bụ akwụkwọ maka oge anyị. Ọ bụ akwụkwọ na-agwa, nsogbu, ma na-akpali akpali.
N'ime ọnwa abụọ gara aga, anyị agbalewo ndị ọkachamara anọ ọzọ.
N'ọnwa June, anyị gbara Kenneth Cloggie ajụjụ ọnụ, bụ Edinburgh onye ọka iwu iwu omekome akọwa usoro nke nne ma ọ bụ nna na nwatakịrị nwere ike ihu ma ọ bụrụ na ebubo na enwe mmekọahụ. Ọ hụwo ịrị elu nke mmejọ ndị metụtara ịntanetị iwe. N'ajụjụ ọnụ ya ga-apụta na weebụsaịtị ebe ọ bụla.
Mgbe anyị na-aga Australia na July anyị mere mkparịta ụka nke 45 na Liz Walker, onye isi nwoke nkụzi. Liz na-ekpughe ihe na-akpali agụụ mmekọahụ dị na bọmbụ ụlọ akwụkwọ 6 dị afọ iri na ụma. Ya akụkọ na-eme ka ọgụgụ dị mma. Ugbu a, ọ na - arụ ọrụ na Prọfesọ Gail Dines na - egwu egwu Omenala.
Dr Paula Banca (nke dị n'okpuru ebe a), a neuroscience nchọpụta site na Mahadum Cambridge nyere ihe ọmụma bara uru n'ime akwụkwọ nyocha ọ bipụtara Ihe omuma, imechi anya na nlezighi anya maka ugwo olu. Achọpụtara nchọpụta a magburu onwe ya mgbe ọ meriri 2016 Research Award site na Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ.
Anyị laghachiri na Scotland, anyị na Anne Chilton gbara ya ajụjụ ọnụ, isi nke Ọkachamara Ọrụ maka Ndụmọdụ na Mmekọrịta Scotland ịmụta banyere usoro ọzụzụ maka ndị na-agwọ ọrịa na Scotland. O kwuru na e nwere ndị ọkachamara 30 ugbu a zụrụ azụ iji zụlite di na nwunye na ịrị elu nke nsogbu ahụ ike mmekọahụ. Ọ na-eju ya anya na ntakịrị enyemaka ego dị n'aka Gọọmenti Scotland maka nsogbu a na-eto eto.
TRF ga-enyefe klas na ụmụ akwụkwọ na Edinburgh Academy, George Watson na St. Columba's ụlọ akwụkwọ Kilmacolm na mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike, mmekọrịta, omekome na mmekọrịta malitere 1st Septemba. Anyị ga-agwa nne na nna na ụmụ akwụkwọ na Ememme Echiche nke George Watson na Septemba ma ruo nne na nna nke ụmụ akwụkwọ na Tonbridge School, England na October.
Na abali iri-na-ato nke onwa iri ka anyi na-agwa ndi nkuzi okwu Medico-Chirurgical Society of Edinburghbanyere mmetụta nke ịntanetị na-ahụ maka ahụ ike ụmụaka. Nke a Society na-arụrịta ụka banyere ahụike kemgbe 1821.
Bịa soro anyị na 16th November na Sanctuary nke Augustine United Church, 41 George IV Bridge, Edinburgh, EH1 1EL mgbe onye isi anyị bụ Mary Sharpe ga-abụ onye isi okwu dị ka akụkụ nke Edinburgh International Center for Spirituality and Peace mmekota. Ọ ga-ekwu maka "Ime mmụọ, ọmịiko na ịictionụ ọgwụ ike". Nke a ga - esochi mkparịta ụka ụka yana ndị ọkachamara ndị ọzọ gụnyere nne na nna na onye osote onye nkuzi bụ Audrey Fairgrieve, yana papa na onye mgbasa ozi ahụike, Douglas Guest. Ndi Darryl Mead, onye isi oche nke wardgwọ Ọrụ introducedgwọ, ga-ewebata ndị ga-ekwu okwu.
Anyị ga-enye ndị ọrụ ahụike, ndị nkụzi na ndị ọkàiwu na ogbako ụlọ nzukọ na ogbako ọ bụla n'afọ Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ na Salt Lake City na 5-7 October. Aha ya n'afọ a bụ Ahụike Mmekọahụ na Ụwa Digital.
On 21st October anyị ga-ekwu okwu kwa afọ ogbako ezinụlọ na Zagreb, Croatia isiokwu ya bụ "Ezinụlọ, Schoolslọ akwụkwọ: Igodo nke nnwere onwe pụọ na ịictionụ ọgwụ ọjọọ". Onyinye anyị ga-amalite site na nkuzi ihu igwe n'ụtụtụ ma anyị ga-eduga ogbako na mgbede ụbọchị ahụ.
Anyị na-agbanwe n'oge na-adịbeghị anya site na "ụbụrụ anyị na ịhụnanya na mmekọahụ" mgbe Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ ahụ, "ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị". Ebumnuche bụ ịmegharị ihe na-egosi na ịntanetị n'ekwughị okwu ahụ bụ "porn". Anyị ka na-elekwasị anya n'ịkụzi banyere usoro ụgwọ ọrụ ụbụrụ. Ụfọdụ ndị chọpụtara na okwu ahụ bụ "ụbụrụ" dị ntakịrị ka ọ na-etinye, ikwere ihe ọmụma banyere ọdịnala ma ọ bụ na-ahụ maka ọhụụ na-achọrọ iji gụọ ihe onwunwe anyị. Nke a abụghị ikpe.